हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भएमा कस्तो हुनेछ बैंक ? : Himali Khabar
हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भएमा कस्तो हुनेछ बैंक ?
काठमाडौं, २२ पौस । हिमालयन बैंकले छिट्टै मर्जरको टुंगो लगाउने भएको छ। स्रोतका अनुसार बैंकले सञ्चालक सुनिलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको मर्जर –एक्युजिसन उपसमितिले मर्जरबारे अन्तिम चरणको छलफल गरिरहेको छ ।
हिमालयन बैंकसँग कहिले इन्भेष्टमेन्ट, बैंक अफ काठमाडू त कहिले सिभिल बैंकसँग मर्जर गर्न लागिएको भन्ने चर्चा बजारमा भइरहेको छ । तर स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निचोडमा पुगिसकेको छ ।
मर्जर कमिटिएका एक सदस्यले छिटै उक्त निर्णय सार्वजनीक गर्ने जानकारी दिए । उसो त यी दुबै बैंकले साधारण सभा समेत आह्वान गरिसकेका छन् । सोही साधारण सभाबाट मर्जरको जिम्मेवारी संचालक समितिलाई दिने छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारणसभा माघ ८ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ ।साधारणसभामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्ज प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण रूपमा अख्तियारी दिने प्रस्ताव गर्दैछ।
मर्जरपछि बैंकको कर्जा प्रवाह २ खर्ब ४० अर्ब बढी हुनेछ। निक्षेप ३ खर्ब १२ अर्ब हुनेछ। पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार हिमालयनको निक्षेप १ खर्ब २८ अर्ब र कर्जा ९९ अर्ब ३८ करोड छ। सो अवधिमा इन्भेष्टमेन्टको निक्षेप १ खर्ब ८४ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ३९ अर्ब छ।
हिमालयन बैंकले पनि साधारणसभाबाट मर्जका सबै प्रक्रिया सञ्चालक समितिलाई दिदै छ । बैंकको साधारण सभा पुस २७ गतेका लागि बोलाइएको छ। दुवै बैंकको साधारण सभाबाट अख्तियारी हस्तान्तरण प्रस्ताव पारित भएपछि एकअर्कासँग गाभिने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारणसभा माघ ८ मा, लाभांश र…
वाणिज्य बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा मिस नेपाल नम्रता…
सिटिजन्स बैंकको साधारण सभा जेठ २७ मा आह्वान